धनाडीको भेटाई देउन मेरी मायालु सार्वजनिक « प्रशासन
धनाडीको भेटाई देउन मेरी मायालु सार्वजनिक
धनगढी । सञ्चारकर्मी तथा लोक दोहोरी गायक राजा राजेन्द्र धनाडीको दोस्रो लोक दोहोरी एल्बम भेटाई देउन मेरी मायालुको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । कुसुम रेकर्डिङ स्टुडियो अत्तरियाबाट रेकर्ड भएको प्रेम बियोगमा आधारित उक्त भिडियोलाई बसन्त फिल्मस प्रा. लि. काठमाडौँले बजारमा ल्याएको हो ।
गीत गायक धनाडीको आफ्नै लय, शब्द ताथ स्वँर रहेको छ भने निर्मला खडायतले धनाडीलाई साथ दिएकी छन । चर्चित मोडेल सुरज रावल र सरगम श्रेष्ठको अभिनय उक्त म्यूजिक भिडियोमा देख्न पाइन्छ ।
सुदूरपश्चिमको विकट पहाडी जिल्ला बैतडीको तल्लोस्वराड उदयदेव गाबिसमा जन्मनुभएका गायक राजेन्द्र बिगत २ बर्ष देखी धनगढी स्थित रेडियो सुदूर सन्देशमा कार्यरत छन् । सञ्चारकर्मी मात्र नभई गीत संगीतको क्षेत्रमा उनी आफ्नो पहिचान बनाइरहेका छन् । उनले यस अघि मेरै दिलमा छौ नामक लोक दोहोरी गीत बजारमा ल्याइसकेका छन् । सफल कलाकार बन्नका लागि सबैखालका गीत गाउनु पर्छ भन्ने मान्यता उनको छ ।
उनी अरु चोटै चोटको जिन्दगी, मरे पछी बोल्न पाउदैन, बाह्रखरी जस्ता लोक दोहोरी गीत बजारमा आउने बताउछन् । गीत संगीत तिर लागेर बाँच्न कठिन भएपनि समस्या, चुनौतिलाई सामना गर्दै अगाडी बढे सफल बन्न सकिन्छ भन्ने उहाको धारणा छ । कलाकर्मी एकिकृत भएर नेपाली गीतसंगीतको लागि लडन सके कलाकारको भविष्य उज्वल उनी देख्छन् ।